Anyị amatala nkọwa mbụ gbasara Kirin 985 | Gam akporosis
Kirin 985 mbụ nkọwa ekpughere
Huawei dị elu ugbu a, dị ka P30, jiri Kirin 980 mee ihe dị ka ihe nhazi. Akara ndị China gosipụtara otu afọ gara aga ihe nhazi ohuru a maka njedebe ya. Ihe nhazi nke ga - adighi anya, kedu ihe Kirin 985. Ihe omuma ohuru a kwesiri igosi oganihu nke ndi China nwere na ndi nhazi.
Ekpughela nkọwa mbụ banyere Kirin 985 a. Ka anyị wee nwee ike ịmata ihe Huawei kwadebeere anyị na nhazi a. Nlereanya nke kwesiri ịbata na Huawei Mate 30 na ọdịda nke afọ a.
Huawei emeela ka ndị nhazi ya kawanye mma oge. Nke a bụ ihe ga-egosipụtakwa na Kirin 985. Na ụdị ọhụrụ a a na-atụ anya ike dị ukwuu. N'ezie, akụkọ ndị mbụ a na-ekwu na nke ahụ ga-enye 20% arụmọrụ karịa karịa onye bu ya ụzọ. Ya mere anyi huru oganihu di otua.
Dị ka afọ gara aga, a ga-arụpụta ihe nhazi ahụ na usoro 7nm. Ọ bụ ezie na n'ọnọdụ a, a na-atụ anya na a ga-eji usoro EUV (Extreme Ultraviolet Lithography) mee ihe. Nke a na - enyere aka ime ka mmepụta gị zie ezi, nke ga - enyere aka belata oge ị na - emepụta, yana ụgwọ gị.
TSMC ga-ahụ maka mmepụta nke Kirin 985 ọzọ, dịka ọ ga-eme na Huawei's processor high-end processor. Hụ nsonaazụ ọma ndị enwetara n'afọ gara aga, ọ na-achọ iji jigide nke a n'oge a. Ọzọkwa, a na-atụ anya ya anyị na-ahụ ihe dị iche na 5G nke ya.
Ọ bụ ezie na nke a abụghị ihe a kwadoro. Ọ bụ ezie na a ga-atụ anya na ọ ga-adị ka nke ahụ, na-eche na akara ahụ na-arụ ọrụ na ekwentị nwere 5G. Ma n'ezie Anyị ga-ama ma ọ bụrụ na Kirin 985 bịarutere na 5G nwa afọ, ma ọ bụ enwere ike ịnweta ndakọrịta site na modem, dị ka Balong 5000.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » Kirin 985 mbụ nkọwa ekpughere
Ihe oyiyi mgbasa ozi a na-akwado atụmatụ nke OnePlus 7 Pro